क्षति निर्धारण प्रक्रिया | Law & More B.V.
ब्लग » क्षति निर्धारण प्रक्रिया
क्षति निर्धारण प्रक्रिया
अगस्ट 3, 2020
अदालतको फैसलामा प्राय जसो कुनै एक पक्षलाई राज्यले तोक्ने क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन्छ। कार्यवाही गर्न दलहरू यसैले एक नयाँ प्रक्रियाको आधारमा हुन्, अर्थात् क्षतिको आकलन प्रक्रिया। यद्यपि त्यस अवस्थामा दलहरू वर्ग एकमा फिर्ता हुँदैनन्। वास्तवमा क्षति निर्धारण प्रक्रियालाई मुख्य कार्यवाहीको निरन्तरताका रूपमा मान्न सकिन्छ, जुन केवल क्षतिग्रस्त वस्तुहरू निर्धारण गर्नु हो र क्षतिपूर्तिको हद दिनु पर्दछ। यो प्रक्रिया, उदाहरणका लागि, चिन्तित हुन सक्छ केही क्षतिग्रस्त सामान क्षतिपूर्तिको लागि योग्य छ वा क्षतिपूर्ति दायित्व कुन हदसम्म घाइते पार्टीको पक्षका कारण सर्तहरू हो। यस सम्बन्धमा क्षति निर्धारण प्रक्रिया मुख्य कार्यवाही भन्दा फरक छ, जुन दायित्वको आधार निर्धारण गर्ने र यसैले क्षतिपूर्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा।
यदि मुख्य कार्यवाहीमा दायित्वको आधार स्थापित गरिएको छ भने अदालतहरूले पक्षहरूलाई क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन प्रक्रियामा पठाउन सक्दछ। यद्यपि, त्यस्तो सिफारिश जहिले पनि मुख्य कार्यवाहीमा न्यायाधीशको सम्भावनाहरूमा पर्दैन। आधारभूत सिद्धान्त यो हो कि न्यायाधीशले सैद्धान्तिक रूपमा क्षतिपूर्तिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ जुन यो क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइयो। केवल यदि मुख्य कार्यवाहीमा क्षतिको मूल्यांकन सम्भव छैन भने, उदाहरणका लागि कि यसले भविष्यमा हुने क्षतिको चिन्ता गर्दछ वा थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने, मुख्य कार्यवाहीका न्यायाधीशले यस सिद्धान्तबाट विचलित गर्न सक्दछन् र पक्षहरूलाई क्षति निर्धारण प्रक्रियामा पठाउँछन्। थप रूपमा, क्षति निर्धारण प्रक्रिया केवल क्षतिपूर्तिको कानूनी दायित्वमा लागू हुन सक्छ, जस्तै ती पूर्वनिर्धारित वा यातनाद्वारा। तसर्थ, क्षति निर्धारण प्रक्रिया सम्भव छैन जब यो कानुनी कार्यबाट उत्पन्न हुने क्षतिको भुक्तानीको दायित्व हो, जस्तै कि एक सम्झौता।
त्यहाँ छुट्टै तर त्यस पछि हुने क्षतिको मूल्यांकन प्रक्रियाको सम्भावनाका धेरै फाइदाहरू छन्। वास्तवमा, मुख्य र निम्न क्षति मूल्यांकन प्रक्रिया बीचको विभाजनले दायित्वको मुद्दालाई पहिले क्षतिको हदसम्म सम्बोधन नगरी छलफल गर्न सम्भव बनाउँदछ र यसलाई पुष्टि गर्न महत्वपूर्ण लागतहरू खडा गर्दछ। जे भए पनि यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न कि न्यायाधीशले अर्को पक्षको दायित्व अस्वीकार गर्नेछ। त्यो अवस्थामा, क्षतिको हद र यसको लागि लाग्ने लागतहरूको बारेमा छलफल व्यर्थ हुने थियो। थप रूपमा, यो सम्भव छ कि पक्षहरूले पछि क्षतिपूर्तिको रकमको बारेमा अदालत बाहिर एक सम्झौतामा पुग्न सम्भव छ, यदि अदालतले दायित्व निर्धारण गरेको छ। त्यो अवस्थामा, खर्चको लागि र मूल्या of्कनको प्रयासलाई बाँकी राखिन्छ। दावीकर्ताको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा कानुनी लागतको राशिमा निहित छ। जब मुख्य कार्यवाहीको दावीकर्ताले मात्र दायित्व मुद्दाहरूको बारेमा मुद्दा पुर्‍याउँछ भने, कार्यवाहीको लागत निर्धारण मूल्यको दाबीसँग मिल्दछ। मुख्य कार्यवाहीमा तुरुन्त क्षतिपूर्तिको पर्याप्त रकम दाबी गरिएको भन्दा यो कम लागतमा जान्छ।
यद्यपि क्षति निर्धारण प्रक्रिया मुख्य कार्यवाहीको निरन्तरताको रूपमा देख्न सकिन्छ, यसलाई एक स्वतन्त्र प्रक्रियाको रूपमा शुरू गर्नुपर्दछ। यो अर्को पक्षलाई क्षतिको कथनको सेवा द्वारा गरिन्छ। एक subpoena मा पनि लागू गरीएको कानुनी आवश्यकताहरू विचार गरिनु पर्छ। सामग्रीको मामलामा, क्षतिको बयानमा "क्षतिको मार्ग जसको लागि तरलता दाबी गरिएको छ, विस्तृत रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ", अर्को शब्दमा दाबी गरिएको क्षति वस्तुहरूको एक सिंहावलोकन समावेश गर्दछ। सिद्धान्तमा क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पुनः दावी गर्न वा प्रत्येक क्षतिग्रस्त वस्तुको लागि सहि रकम बताउन आवश्यक पर्दैन। जे भए पनि न्यायाधीशले कथित तथ्यको आधारमा क्षतिको स्वतन्त्र रूपमा आकलन गर्नुपर्नेछ। जे होस्, दाबीको लागि क्षति बयानमा निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ। क्षति कथन को तान्नु सिद्धान्त मा बाध्यकारी छैन र क्षति कथन सेवा पछि पनि नयाँ वस्तुहरु जोड्न यो सम्भव छ।
क्षतिको मूल्यांकन प्रक्रियाको अर्को पाठ्यक्रम साधारण अदालत प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो छ। उदाहरण को लागी, निष्कर्षको साधारण परिवर्तन र अदालतमा सुनुवाई पनि छ। प्रमाण वा विशेषज्ञ रिपोर्टहरू पनि यस प्रक्रियामा अनुरोध गर्न सकिन्छ र अदालतको शुल्क फेरि लिइनेछ। प्रतिवादीले यी कार्यवाहीमा पुन: वकील स्थापना गर्न आवश्यक छ। यदि प्रतिवादी क्षति निर्धारण प्रक्रियामा देखा पर्दैन भने पूर्वनिर्धारित हुन सक्छ। जब यो अन्तिम निर्णयको कुरा आउँदछ, जहाँ यो सबै प्रकारका क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सकिन्छ, सामान्य नियमहरू पनि लागू हुन्छन्। क्षति निर्धारण प्रक्रियामा फैसलाले एक लागूयोग्य शीर्षक पनि प्रदान गर्दछ र यसको परिणाम हुन्छ कि क्षतिको निर्धारण वा समाधान गरिएको छ।
जब यो क्षति मूल्यांकन प्रक्रियाको लागि आउँदछ, यो एक वकील संग परामर्श गर्न सल्लाह दिइन्छ। प्रतिवादीको मामलामा, यो आवश्यक पनि छ। यो अनौठो होइन। सबै पछि, क्षति आकलन को सिद्धान्त धेरै व्यापक र जटिल छ। के तपाईं घाटा अनुमानसँग कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाईं क्षति निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा थप जानकारी चाहानुहुन्छ? कृपया वकिलहरुलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More. Law & More वकिलहरू प्रक्रियागत कानून र क्षति निर्धारण मा विशेषज्ञ हुन् र दावी प्रक्रियाको बखत तपाईंलाई कानुनी सल्लाह वा सहायता प्रदान गर्न खुसी छन्।
अघिल्लो पोस्ट काममा बदमाशी
अर्को पोस्ट सम्बन्धविच्छेद र अभिभावकको हिरासत। तपाईंले के जान्नु आवश्यक छ?